Waxa la sheegay in madaxi onag shane ee dalka soo galay ee dawlada isu dhiibay in u si xoriyad ah ku dhaqdhaqaaqayo – ዜና ከምንጩ
Waxa wargayska addis maleda u waramay madaxda deegaanka oromiya waxaana ay sheegeen in madaxi onaag shane ee waaxda koonfureed ee dhawaan dawlada isusoo dhiibay mudane Jaal Goolija u six or ahugu warwareegayay meelo kala duwan.
Madaxan onag shane ee gacanta dawlada isu dhiibay ayaa waxa dhawaan lagu arkay asaga oo la la socda kooxda dhawaan goolaha wakiilada shacbigu ay argagaxisada ku tilmaamen. Xiligan xaadirka ahna inta la soo dhaweeyay waxa u ku dhaqdhaqaaqaya six or ah oo waxa u sheegay in u shacabkiisa u shaqayn doono.
Madaxa xafiiska xidhiidhka arimaha awlada mudane Getajew Baalja oo u waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay in Jaal Goolija u ka soo baxay kooxdii u ku jiray oo u gacanta u dhiibay dawlada. Sida oo kale madaama u kooxda tplf u gacan la lahaa halkan wax dhibaato ah oo la soo gaadhsiiyay ma jirto.
Madaxa xafiiskaasi wax kale oo u sheegay kooxda onag shane oo ku biirtay kooxda argagaxisada ah ee tplf in dawladu ay ka ogoshahay cafis hadii ay isasoo dhiiban. Jaal waxa u ku soo noqday dalkiisi, hadii u dalkiisa ku soo laabtayna wxa u dalkiisa uga halgami kara nabadgalyad.
Sida u masuulku ugu waramay wargayska addis maleda inkasta oo Jaal Goolija u lashaqaysan jiray kooxda argagaxisada ah ee tplf, u hadana dawlada isusoo dhiibay oo u yidhi si nabadgalyo leh ayaan ku halgamaya wax sua’al ah oo lawaydiiyo ma haboona. Waxana u wadan kara halgankiisa si nabadgalyo ah.
Getaajew waxa kale oo u sheegay in xilgan xaadirka ah u Jaal Goolijo u goa’ansaday in dawlada isu soo dhiibay oo dawladuna anay ogalayn in kooxda argagaxisada ah ee tplf in ay heshiis la gasho waxa u goaansaday in halganka shacbiga oromadu aanu noqonayn duurka dhaxdiisa .
Waxa kale oo u masuulkaasi u sheegay in kooxda tiplf hadafkeedu u yahay in ay dalka burburiyaan waxana ay adeesan jireen bu yidhi kooxaha xag jirka ah kuwaasi oo ay ka midka haayeen kooxda onag shane. Jaal Goolija in u gooansado in u ka soo dhax baxo kooxdaasi waxa ay hoos u dhigaysa cududa weerarada kooxda tplf.
Waxa kale oo u hadalkiisa u raaciyay Geetajew in u hogaamiyaha onag shane kooxdiisa u ka soo dhax baxo waxa ay hoos u dhigi karaysa dagalada dalka gudihiisa, balse culayska ay wadamada dabaduhu ay ku hayaandalka waxba kama dhimayso.
Waxa kale oo u hadalkiisa ku soo qaatay in kooxda argagaxisada ah ee tplf ee ay ka wadaan wuqooyiga dalka ay kooxda onag shane kaalin wayn kaga jirtay oo xiligan laga bilaabona ay kooxdu si nabadgalyo ah si ay ugu halganto ugu soo noqon doonto.
Waxa kale oo u intaasi ku daray in u Jaal isa soo dhiibo baaqi dawlada ee ahaa “halgank ha ka soo baxo duurka oo ha u soo baxo fagaaraha” waa mid si wacan uga jawaabaya. Waxana u naga caawinaya in aan is wada kaashano oo aan fiiro gaar ah siino dagalada ka socda wuqooyiga dalka oo aan iskaashano si dhinac aanu uga soo wada jeedsano.
Waxa u ku booriyay Jaal Goolija oo ah madaxa onag shane waaxda koonfureed goaankiisa. Sababta u uga soo baxay kooxdiisana waxa weeyan bu yidhi waxa u aaminsanyahay in dagalada ka soocda dalka aany ahayn qaar loo baahanyahay.
Mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska xeer ilaaliytaha federaalka oo u waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay in cid kasta oo ku dhaqanta wixii aanu sharcigu ogolayn waxa u kaga baxsan kara sharciga oo kaliya cafiska sharcigu u uogoolaado kaliya, waxa kale oo u yidhi arintani Jaal Goolijana waxa ay u baahantahay wakhti si looga faaloodo, waxaana u ugu balan qaaday in u ka warami doono arintan, hadaba wargayskan oo isku dayay in u si balaadhan uga warayso ayaa awoodi waayay in u helo shaqaalahan xafiiska xeer ilaaliyaha ka midka ah ee ugu balan qaaday in u warami doono balantiina wuu kaga baxay.
Total views : 6693754